Izindaba - Uyini umehluko phakathi kwamamaski e-N95 ne-KF94?
Umehluko phakathi kwamaski e-N95 ne-KF94 mincane ngenxa yezici abasebenzisi abaningi abazikhathalelayo. I-KF94 yizinga le- "Korea filter" elifana nesilinganiso se-US N95 mask.
Umehluko Phakathi Kamaski Ka-N95 Nama-KF94: Axoshiwe
Zibukeka zifana, futhi zihlunga amaphesenti ezinhlayiya ezicishe zifane — ama-95% ngokuqhathaniswa nama-94%. Leli shadi elivela ku-3M lichaza umehluko phakathi kwamaski waseKorea we-N95 kanye "nekilasi lokuqala". Amakholomu aqokomisa lezi zinhlobo ezimbili zemaski.
Kumethrikhi abantu abaningi abayikhathalelayo (ukusebenza ngokuhlunga), bacishe bafane. Ezimweni eziningi, abasebenzisi be-mask ngeke banakekele umehluko ongu-1% wokuhlunga.
Amazinga we-KF94 aboleka okuningi kusuka eYurophu kune-US
Kodwa-ke, ngomehluko phakathi kwamazinga, izindinganiso zaseKorea ziyefana kakhulu nezindinganiso ze-EU kunezilinganiso zase-US. Isibonelo, izinhlangano zezitifiketi zase-US zihlola ukuhlunga ukusebenza kusetshenziswa izinhlayiya zikasawoti, kanti amazinga aseYurophu nawaseKorea ahlola uwoyela noparafini.
Ngokufanayo, i-US ihlola ukufilitha ngezinga lokugeleza kwamalitha angama-85 ngomzuzu, kanti i-EU neKorea zivivinya isilinganiso sokugeleza kwamalitha angama-95 ngomzuzu. Noma kunjalo, lo mehluko mncane.
Eminye Umehluko Phakathi Kokulinganiswa Kwemaski
Ngaphandle komehluko ongu-1% wokuhlunga, kukhona umehluko omncane kwezinye izici.
• Isibonelo, amazinga adinga ukuthi ama-busi e-N95 kube lula ukuphefumula ngawo (“ukumelana nomoya”).
• Amaski waseKorea adingeka ukuthi avivinye “imvume ye-CO2,” evimbela i-CO2 ekwakheni ngaphakathi kwesifihla-buso. Ngokuphambene, imaski le-N95 ayinayo le mfuneko.
Kodwa-ke, ukukhathazeka mayelana nokwakhiwa kwe-CO2 kungahle kweqe. Isibonelo, isifundo esisodwa. ithole ukuthi, nangesikhathi sokuvivinya umzimba ngokulingene, abesifazane abafake izifihla-buso ze-N95 abanawo umehluko emazingeni e-oxygen egazini.
• Ukuthola ilebula lesifihla-buso, iKorea idinga ukuhlolwa komuntu okufanelekile, njengalokhu engikwenza ngezansi. Isitifiketi se-US N95 asidingi isivivinyo esifanelekile.
Kodwa-ke, lokho akusho ukuthi abantu akufanele benze izivivinyo ezilinganayo ngamaski e-N95. I-ejensi yase-US elawula ukuphepha emsebenzini (OSHA) idinga ukuthi izimboni ze-centain zihlolwe kahle kanye ngonyaka. Ukuthi nje ukuhlolwa okufanelekile akudingeki ukuthi umenzi athole ilebula le-N95.
Ama-Masks we-N95 vs KF94: Ngezansi
Esimeni abantu abaningi abakhathalelayo (ukuhlunga) imaski ye-N95 ne-KF94 icishe ifane. Kodwa-ke, kunokwehluka okuncane kwezinye izinto, njengokumelana nokuphefumula nokuhlolwa okufanele.
Okugcwele okuzenzakalelayo 2D N95 amaseviyethi imaski Ukwenza Machine
Okuzenzakalelayo KF94 Fish Uhlobo 3D imaski Ukwenza Machine